DataNumen: Kit Development Software maka ndị mmepe
Kit Development Software (SDK) maka ndị mmepe
N'ihi na onye ọ bụla data mgbake software ngwaahịa, anyị na-enye a kwekọrọ ekwekọ ihe ngwanrọ (SDK). Mmepe nwere ike na-akpọ ngwa mmemme interface (API) na-arụ ọrụ na SDK iji chịkwaa usoro nrụzi ozugbo ma jikọtara teknụzụ mgbake data anyị enweghị atụ na ngwaahịa sọftụwia ha na enweghị nsogbu.
Ihe ngwugwu SDK gunyere SDK DLL faịlị, akwụkwọ na koodu nlele n’asụsụ mmemme dị iche iche maka iji API.
Ndị mmepe nwere ike ịme ihe na:
Microsoft Anya C ++ gụnyere C # na .NET
Microsoft Anya Foxpro
Microsoft Visual Basic tinyere VB .NET
Borland C ++ Nrụpụta
Asụsụ mmemme ọ bụla nke na-akwado ọkpụkpọ DLL
Enwere ụdị ikike atọ maka SDK:
Onye Mmepụta License: Kwe ka ọnụọgụ ndị mmepe akọwapụtara iji SDK iji zụlite ngwa ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ azụrụ otu ikike onye nrụpụta, naanị otu onye nrụpụta nwere ike iji SDK iji zụlite ngwa ya. Biko rịba ama Ọ BANNGH. redistribute SDK DLL na ngwa ya belụsọ ma ọ zụrụla akwụkwọ ikike ma ọ bụ ikikere enweghị akwụ ụgwọ akọwapụtara n'okpuru.
Oge Ikike Oge: Kwe ka ọnụọgụ nọmba nke redistributable SDK DLL ga-etinye ya na ngwa ahụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ na mmadụ azụta akwụkwọ ikike iri 10, mgbe ahụ ọ nwere ike ịkesa akwụkwọ SDK DLL iri iri na ngwa ya.
Akwụkwọ ikike na-enweghị eze: Kwe ka ọnụọgụ na-akparaghị ókè SDK DLLs ga-etinye na ngwa ahụ. Nke a bụ otu ihe dịka ọnụọgụ nke oge ikikere na-akparaghị ókè.
Ntuziaka Nyocha n'efu:
Biko kpọtụrụ anyị iji nweta ozi zuru ezu ma ọ bụ rịọ maka ụdị nnwale SDK n'efu.